တရုတ်စိတ်ကြိုက်ချောမွေ့သောအမျိုးသမီးများ Baguette အိတ်ပခုံးလက်ကိုင်အိတ်ပိုက်ဆံအိတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ | Leather ချန်ပီယံ
Mini Bag ပါ
Clutches & Pochettes များ
ပိုက်ဆံအိတ် & ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
စိတ်ကြိုက်အနက်ရောင်ချောမွေ့သားရေဖက်ရှင် Mens Crossbody M ...
OEM အနက်ရောင် Crossgrain သားရေလက်ဆွဲဖက်ရှင်ရေပုံး ...
စိတ်ကြိုက်ရိုက်နှိပ်ထားသောမြွေသားရေအမျိုးသမီး Studded Tote ...
အနက်ရောင်သားရေအမျိုးသမီးများ ၀ တ်ထားသောတုတ်ထိုးစျေး ၀ ယ်သူ ...
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော Ecru Pebble သားရေအမျိုးသမီး Tote Shoulder B ...
စိတ်ကြိုက်ရွှေသတ္တုသားရေအလယ်အလတ်အမျိုးသမီး Tote အိတ် M ...
စိတ်ကြိုက်တိရိစ္ဆာန်ဖောင်းကြွအညိုရောင်သားရေ Fanny Pack Cros ...
Custom Smooth Leather အမျိုးသမီး Mini Crossbody City Bag
စိတ်ကြိုက်စောင်သားရေ Fanny Pack အမျိုးသမီး Crossbody Be ...
စိတ်ကြိုက်ချောမွေ့သောအမျိုးသမီးများ Baguette အိတ်ပခုံး Ha ...
စိတ်ကြိုက် Croc Leather အမျိုးသမီး Baguette အိတ်ပခုံးလက် ...
စိတ်ကြိုက် Pebble သားရေအမျိုးသမီးအိတ်ကြမ်းပိုးအိတ်ကြီး
စိတ်ကြိုက် Pebble သားရေအမျိုးသမီးပခုံး Hobo အိတ် Handba ...
စိတ်ကြိုက်သားရေဘော်စတွန်ပတ် ၀ န်းကျင်လက်ကိုင်အိတ်ပိုက်ဆံအိတ်မြို့ Shoul ...
စိတ်ကြိုက်သားရေအမျိုးသမီးဘော်စတွန်အိတ်အသေးစား Crossbody လက် ...
Custom Crossgrain Leather Women Satchel Handbag ပိုက်ဆံအိတ်
စိတ်ကြိုက်ရေတပ် Saffiano သားရေအမျိုးသမီးစီးတီးလက်ဆွဲအိတ်
စိတ်တိုင်းကျချောမွေ့သောအမျိုးသမီးများအတွက် Baguette အိတ်ပခုံးလက်ကိုင်အိတ်
Baguette ပခုံးအိတ်။ သေးငယ်သောသတ္တုချိတ်၊ သံလိုက်ပိတ်၊ သံတို၊ ရှည်ဖြုတ်နိုင်သောပခုံးသိုင်းကြိုးနှစ်ခု။
FOB စျေးနှုန်း: USD7.2-12.7/PC
Min.Order အရေအတွက်: ၁၀၀ အပိုင်းပိုင်း
ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်: 20000 Pieces/လ
မူရင်းနေရာ: ကွမ်ကျိုး၊ တရုတ် (ပြည်မ)
ထုပ်ပိုးမှု: စံ Opp အိတ် + ယက်မအိတ် + ထုပ်ပိုးတင်ပို့ခြင်း
Baguette အိတ်ပုံစံ၊ ပခုံးတိုတစ်ချောင်း၊ ရှည်လျားပြီးနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောချိန်ညှိနိုင်သောသိုင်းကြိုး၊ ရှေ့သတ္တုခါးပတ်
PU Smooth Leather ဖြစ်သည်
အမျိုးသမီးများအတွက် Baguette ပခုံး
Leather Baguette ပခုံးပိုက်ဆံအိတ်
Metal Buckle နှင့်ပခုံး Baguette အိတ်
*ဖြုတ်တပ်နိုင်သောပခုံးသိုင်းကြိုး ၁ ချောင်း
*ရွေးချယ်နိုင်သောချိန်ညှိနိုင်သောပခုံးသိုင်းကြိုးရှည် ၁ ချောင်း
နမူနာ ဦး ဆောင်ချိန်
ထုတ်လုပ်မှု ဦး ဆောင်ချိန်
အရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ ၁၅-၂၇ ရက်အလုပ်လုပ်သည်
မင်းရဲ့အချောဒီဇိုင်းအတွက်ဘဲ၊ ငါတို့ရရှိနိုင်တဲ့နမူနာဒီဇိုင်းအတွက်ဘဲ၊ ချန်ပီယံစက်ရုံမှာစိတ်ကြိုက်အိတ်ဒီဇိုင်းအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိတယ်၊ မင်းကသင့်တော်တဲ့နည်းနဲ့လုပ်ဖို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ငါတို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့တွေကမင်းအတွက်လုပ်ပေးမှာပါ။
ကုမ္ပဏီသတင်းအချက်အလက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၃ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသောလက်ဆွဲအိတ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် tote bag၊ အိတ်၊ ကျောပိုးအိတ်၊ duffel အိတ်၊ လက်ဆွဲအိတ်၊ အလှကုန်အိတ်၊ ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် OEM ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်အမျိုးသမီးများလက်ဆွဲအိတ်၊ သားရေကျောပိုးအိတ်၊ ခါးအိတ်၊ သီတင်းကျွတ်အိတ်၊ လက်ဆွဲအိတ်၊ အလှကုန်အိတ်၊ ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်အသုံးအဆောင်များစသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အဓိကထားပြီး OEM နှင့် ODM အမှာစာအတွက်အရည်အသွေးမြင့် PU Leather နှင့်သားရေစစ်နှစ်ခုလုံးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကအားဖြင့်အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးမြင့်သားရေအိတ်ကိုအဓိကထားပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်တင်းကျပ်သော QC အဖွဲ့ရှိသည်။ အိတ်တစ်ခုစီသည်သင်္ဘောပြဿနာမတိုင်မီအရည်အသွေးကိုအပြည့်အ ၀ စစ်ဆေးလိမ့်မည်။
2. စိတ်ကြိုက် LOGO
မင်းရဲ့လိုဂိုကိုသားရေ၊ အဖုံး၊ hardware၊ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့တံဆိပ်စသည်ဖြင့်တင်နိုင်ပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့်ဖောင်းကြွ/debossed လိုဂို၊ ရွှေ/ငွေသတ္တုတံဆိပ်ရိုက်တံဆိပ်၊ ရာဘာတံဆိပ်၊ ပန်းထိုးတံဆိပ်၊ သတ္တုလိုဂို၊ လေဆာဖြတ်/ထွင်းထားသောလိုဂိုများအပါအ ၀ င်လိုဂိုစတိုင်လ်များ
3.Customized သားရေ Texture & အရောင်
မင်းလိုချင်တဲ့သားရေထည်ကိုငါတို့ဆီပို့နိုင်တယ်။ အရောင်အတွက်၊ သင် Pantone၊ ပုံအသေးစိတ်အရောင်၊ သင်ရွေးချယ်နိုင်သောသားရေအရောင် swatch ကိုကျွန်ုပ်တို့ပို့နိုင်သည်။
Epi Leather ပါ
ယခင်: စိတ်တိုင်းကျချောမွေ့သောအမျိုးသမီးများအတွက် Baguette အိတ်ပခုံးလက်ကိုင်အိတ်
နောက်တစ်ခု: Tassel နှင့်စိတ်ကြိုက်တိရိစ္ဆာန်ပုံနှိပ်သားရေအမျိုးသမီးများ Mini Crossbody Chain အိတ်
Cross Shoulder အိတ်
စိတ်ကြိုက်ချောမွေ့သောသားရေအမျိုးသမီး Baguette အိတ် ...
စိတ်ကြိုက် Croc Leather အမျိုးသမီး Baguette အိတ်ပခုံး ...
စိတ်ကြိုက်ချောမွေ့သော Leather အမျိုးသမီး Baguette အိတ်အနက်ရောင် ...
စိတ်ကြိုက်ချောမွေ့သားရေအမျိုးသမီးပခုံး Baguette B ...
Weiqi စက်မှုအပိုင်း၊ Changhong ကျေးရွာ၊ Jiahe လမ်း၊ Baiyun ခရိုင်၊ ကွမ်ကျိုး
PU / Half PU / PVC ကိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ
သားရေနှင့် PU အစစ်ကိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ။